DixMax အလုပ်မလုပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 08/01/2022 13:00 | အင်တာနက်ကို
အသုံးပြုသူများသည် DixMax မှတစ်ဆင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရုပ်ရှင်များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းကို ပိုမိုနှစ်သက်လာကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်ပေးဆောင်ခြင်းမပြုချင်သောသူများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည် HBO o Netflix. အတိအကျမတူပေမယ့် အတိုချုံးပြောရရင် အားသာချက်တွေက အများကြီးပါ။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည် ပြဿနာတစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်မှာ အချိန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ DixMax အလုပ်မလုပ်ပါ။
သံသယမရှိဘဲ DixMax ၏ အပြုသဘောဆောင်သောအချက်များသည် များစွာနှင့် အလွန်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း အရိပ်အချို့လည်း ရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၎င်းသည် အခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းသည် Android၊ iOS နှင့် Windows အတွက်ပင် အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို ပေးဆောင်သည့်အချက်ကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖက်ကလည်း အစကတည်းက သတင်းပို့တယ်။ သင့်ဝန်ဆောင်မှုတွင် များစွာနှင့် မကြာခဏ ပျက်ကွက်မှုများအဓိကအားဖြင့် ၎င်း၏ဆာဗာများ ပြည့်ဝနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့ DixMax တိုက်ရိုက် အလုပ်မလုပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို မရနိုင်တော့ပါ။ ဤပို့စ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေအနေအားလုံးကို ယေဘုယျအားဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာများကား အဘယ်နည်း။
1 DixMax ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
1.1 DixMax ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာများ
2 DixMax ၏အခြားရွေးချယ်စရာများ
2.4 pluto တီဗီ
DixMax သည် Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးလုံးတွင် ရနိုင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းများမှ ကြည့်ရှုရန် အကြောင်းအရာများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် အထူးပြုအက်ပ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ ကွန်ပြူတာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဝဘ်ဗားရှင်းလည်း ရှိပါသည်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုံးဝအခမဲ့.
ဤအပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည် (dixmax.com) မှတ်ပုံတင်ခြင်းဝင်းဒိုးတွင် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်၊ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
ထို့နောက် အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်နှင့် အခြားအသုံးပြုသူများထံမှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် စီထားသည့် ၎င်း၏ရုပ်ရှင်နှင့် စီးရီးများ၏ ကတ်တလောက်ကို စတင်ရှာဖွေရန် လုံလောက်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
DixMax ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာများ
DixMax ကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
အစကတည်းက DixMax မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများ အာဏာပိုင်များ၏အမြင်၌။ ၎င်း၏တရားဝင်မှုမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း (ကွဲလွဲသောအမြင်များ) ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ပင်မဒိုမိန်းကို တားမြစ်ခံရနိုင်ခြေရှိသောကြောင့်၊ dixmax.tech သို့မဟုတ် dixmax.xyz ကဲ့သို့သော အခြားဒိုမိန်းများကို ဖွင့်ထားသည်။
သို့သော် တရားရေးဆိုင်ရာ တိုက်ပွဲသည် ပလပ်ဖောင်း၏ developer များအတွက် ဆိုးရွားသောရလဒ်ဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဇန်နဝါရီ 2021 မှစတင်၍ DixMax ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါ သင်သည် ဖတ်နိုင်သည်။ အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်:
မင်္ဂလာပါ DixMax အသုံးပြုသူများနှင့် အပ်လုဒ်လုပ်သူများ။ ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သော ဥပဒေပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် 2021 ခုနှစ်တွင် အသက်ဝင်လာသော ဥရောပသမဂ္ဂရှိ ဥာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (မူပိုင်ခွင့်) ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုကြောင့် DixMax နှင့်ဆင်တူသည့် ပလပ်ဖောင်းများကို မကြာသေးမီက ပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပိတ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် မယူမှတ်ပါ၊ ၎င်းသည် DixMax အသုံးပြုသူများနှင့် developer အားလုံး၏ လုံခြုံရေးနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးတို့အတွက် ဖြစ်သည်။ DixMax ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်းသည် 100% ဘေးကင်းပြီး အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သတိရပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် DixMax iOS ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် 100 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်နေ့တွင် အလုပ်မလုပ်တော့သည့် DixMax TV မှလွဲ၍ မည်သည့်ပြဿနာမှမရှိဘဲ 2020% အမြဲတမ်း 1% ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စနစ်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးအတွက် အက်ပ်လီကေးရှင်းများရှိသည်- DixMax Android (DixMax TV ပိတ်သွားခြင်းကြောင့် Android TV နှင့် မကြာမီ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်) နှင့် DixMax Desktop (Windows7မှစတင်၍ / Linux / MacOS) တို့ကို Applications tab တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည် (ထိုနေရာတွင် ရနိုင်ပါသည်။ စာမျက်နှာ၏အစ) သို့မဟုတ် Telegram အက်ပ်ချန်နယ် (စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် ရနိုင်သည်)။
လင့်ခ်အပ်လုဒ်တင်ခြင်းအကြောင်း- DixMax Desktop အပလီကေးရှင်းများတွင် မကြာမီ (မရှိသေးပါက) ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Telegram နှင့် Twitter တို့ (ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram ကိုသာ ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမည်) မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးကွန်ရက်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကျွန်ုပ်တို့မှကြေငြာပါသည်။
တရားမျှတစေရန်အတွက် DixMax သည် တရားမဝင် သို့မဟုတ် "ခိုးကူးထားသည့်" အကြောင်းအရာများကို ပေးဆောင်သည့် အဆိုပါဝဘ်ဆိုက်များထဲမှ တစ်ခုဟု ယူဆရမည်မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင်၊ ကမ်းလှမ်းထားသော အကြောင်းအရာများအနက်မှ တစ်ခုသာ သက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုပိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုချက်များ မရှိပါက လှုံ့ဆော်မှုနှင့် အပြည့်အဝ တရားဝင် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အနည်းငယ် မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကို လွတ်လပ်စွာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ခုခံကာကွယ်သူများအကြား စကားစစ်ထိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဝေးကွာနေပါသည်။ အဲဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိစေချင်တယ်။ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရန်သို့မဟုတ်တရားမဝင်ကူးယူခြင်းများပြုလုပ်ရန်မည်သူ့ကိုမဆိုဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမည်သည့်နည်းနှင့်မျှကျွန်ုပ်တို့အားအကြံမပေးပါ. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ၎င်းသည် ဗဟုသုတရဖွယ်ဆောင်းပါးမျှသာဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသော ဥပဒေဆိုင်ရာ အခြားရွေးချယ်စရာများကို အာရုံစိုက်ထားသည်။
ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်တွေ့မှာ DixMax က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အသုံးပြုသူအနည်းငယ်အား မိဘမဲ့ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ ဦးနှောက်များကို ရှာဖွေရန် တွန်းအားပေးနေကြသော၊ အဖြေ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး တခြား အခြားရွေးချယ်စရာ. ဒါက အကောင်းဆုံးတွေထဲက အချို့ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
DixMax: CrunchyRoll ၏ကောင်းသောရွေးချယ်မှု
anime ဝါသနာရှင်များ အလွန်တန်ဖိုးထားရသော နာမည်ကြီး platform တစ်ခု။ လှူတဲ့သူတွေ နင် အစဉ်အလာအားဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နှင့် အနာဂတ်ဇာတ်ဝင်ခန်းများဆီသို့ ဦးတည်သည့် ဤဂျပန်ကာတွန်းအမျိုးအစား၏ ကျယ်ပြန့်သော ကတ်တလောက်ဖြစ်သော ရုပ်ရှင်နှင့် စီးရီးများဖြစ်သည်။
CrunchyRoll သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးဆောင်သည့်အရာအားလုံးသည် အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သည့် streaming content site တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် လဲလှယ်ရာတွင် သင်သည် ကြော်ငြာများ၏ အဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းကို စိတ်ရှည်သည်းခံရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းသည် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သည့် ပလပ်ဖောင်းအားလုံးတွင် အလွန်အဖြစ်များပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို ရှောင်ရှားလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခပေးဗားရှင်းကို ရွေးချယ်ရန် အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရုပ်ရှင်နှင့် စီးရီးခေါင်းစဉ်များ စုစည်းမှု
DixMax ၏အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေသောအခါ သင့်ခေါင်းထဲတွင်ရှိနေသောစိတ်ကူးမဟုတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် သိထားသင့်သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကမော်ကွန်းတိုက် ကြီးမားပြီး အကျိုးအမြတ်မယူသော ဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များမှ ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများနှင့် ရုပ်ရှင်များအထိ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာအားလုံးက ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ကြိုနေပါသည်။ ဆိုက်က ကမ်းလှမ်းတယ်။ ရုပ်ရှင်၊ စီးရီးနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ် ၂၅၀၀၀ ကျော်. ပြီးတော့ အရေအတွက်ကလည်း တနေ့တခြား တိုးလာတယ်။
၎င်းသည် စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Brewster Kahle ၁၉၉၆ ခုနှစ် မေလတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ကော်ပီသိမ်းဆည်းထားရန် စိတ်ကူးဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ မပျောက်ပျက်စေရန်နှင့် ကမ်းလှမ်းရန်လည်း ပါဝင်သည်။ အသိပညာကို လွတ်လပ်စွာနှင့် လူတိုင်းဝင်ရောက်ခွင့်၊.
DixMax အလုပ်မလုပ်ပါက၊ Open Culture က ကမ်းလှမ်းထားသည်ကို သင်ကြည့်နိုင်သည်။
ချဉ်းကပ်မှု 00၎င်းသည် Internet Archive ကဲ့သို့တူညီသောလိုင်းများအတိုင်းသွားပါသည်။ ၎င်းသည် YouTube နှင့် အခြားတရားဝင် ဒေါင်းလုဒ်ဝဘ်ဆိုက်များပေါ်ရှိ ရုပ်ရှင်များထံသို့ လင့်ခ်များစွာကို စုစည်းပေးသည့် လက်တွေ့ပေါ်တယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် အကြောင်းအရာကို သူ့ဘာသာသူ မကမ်းလှမ်းသော်လည်း ၎င်းကိုရနိုင်သည့်နေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြသသည်။
Open Culture သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအား ကမ်းလှမ်းသောအရာသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မြင်နိုင်သည်များကို အကျဉ်းချုံးသော်လည်း လက်တွေ့ကျသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
DixMax အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ ဒါကတော့ Pluto TV ပါ။
ဒါက DixMax ရဲ့ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အစားထိုးရွေးချယ်မှုပါ။ ပလူတိုတီတီ၊ လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာပလပ်ဖောင်း။ ၎င်းဝန်ဆောင်မှုသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများနှင့် လိုအပ်ချက်အရ အကြောင်းအရာအချို့ပါရှိသော ပင်မထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားပလပ်ဖောင်းများနှင့် အလွန်ဆင်တူပါသည်။ ယင်းနှင့် အခြားအကြောင်းများကြောင့် ၎င်းသည် လက်ရှိတွင် အသုံးအများဆုံး ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လင့်ခ်: pluto တီဗီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » DixMax အလုပ်မလုပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
Google Docs စာတန်းထိုးနည်း- နေရာအားလုံး